LEGO ကိုမိတ်ဆက်ပေး Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy
09 / 07 / 2019 24 / 01 / 2020 ဂရေဟမ် 1737 Views စာ0မှတ်ချက် 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, 2019, Creator Expert, D2C, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, အင်တာဗျူး, ဂျေမီ Berard, Lego, Lego Creator Expert, LEGO ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့ရက်များ 2019, RLFMDays 2019
Lego Design Manager Jamie Berard သည်အသစ်စက်စက်ကိုတင်ဆက်သည် Creator Expert အစုံ, 10269 Harley-Davidson ဆီ Boyသီးသန့်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ
ဂျေမီဘာရာသည်သူနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါအံ့အားသင့်ဖွယ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် Lego Billund, Denmark ရှိအိမ်များ။ The Lego Creator Expert ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာသည်တီထွင်ဖန်တီးထားသောအုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများကထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်နေရာ - Innovation House ရှိသူ၏အလုပ်နေရာမှသူနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ Read Brick Fanatics လာမည့် set ကို၏ပြန်လည်သုံးသပ်.
ဒီသီးသန့်အင်တာဗျူးမှာတော့ဂျေမီဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် Brick Fanatics ဖြတ်. 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, ဆိုင်မှာသီးသန့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။LEGO.com ဇူလိုင်လ 17 မှ။
ဘာကြောင့် Fay Bot ကိုရွေးချယ်တာလဲ။
ငါတို့ရွေးခဲ့တယ် Harley-Davidson ဆီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီဟာကအထင်ရှားဆုံး၊ လူသိများတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ Harley တံဆိပ်အတွက်ဒီဟာကသူတို့အမှတ်အသားဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် Terminator ကို ၂ ရက်အကြာကတည်းကဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထိုတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်နှင့်မူရင်းနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂၀၁၈ ဗားရှင်းကိုရွေးလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပါ။
ကျနော်တို့စက်ဘီးအတွက်ဘီးအနားကွပ်အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတာယာအသစ်ကိုလည်းလုပ်တယ်၊ ဒါက Fat Boy ပါ။ Lego မော်တော်ဆိုင်ကယ်တာယာအစဉ်အဆက်။ Mike Psiaki ကဒီအနားကွပ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခိုင်းတဲ့အခါသူလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင်သူတို့နှစ်ခုကိုဘေးချင်းကပ်ပြီးဒါကိုနောက်ဘက်အနားကွပ်အတွက်သုံးတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကဒီစက်ဘီးတစ်လုံးထဲကိုအနားကွပ် ၃ ခုရမယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့မှာသူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တာယာတစ်ခုရှိတယ်။
ဒါဟာအတွင်းပိုင်းအပေါ်ဤသေးငယ်တဲ့ဆလင်ဒါရှိပါတယ်, ကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်ကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်သင်ဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုတည်ဆောက်နေသည်ဟုခံစားရသည်၊ ထို့နောက်၎င်းကိုဘောင်အတွင်း၌နေရာချသည်။ လောင်စာဆီ tank နှင့်အတူတူပင်, သင်သည်လောင်စာဆီတိုင်ကီတည်ဆောက်ပြီးတော့သင်ကအပေါ်ကိုဖမ်းယူ။
ပုံသဏ္asာန်အနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ္တဇဆန်လာခြင်းမရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာစေလိုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤတွင်မဟုတ်ပါကဤတွင်များစွာသောအရာများရှိပြီးသင်အနည်းငယ်ရှုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုဆက်လက်ထားရန်ကြိုးစားခဲ့ပေ နည်းပညာသင်မြင်နိုင်သည်၊ ကောင်းစွာမြင်နိူင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဂျီသြမေတြီတစ်ခုပေါ်လာပြီးတင်းကျပ်သောဘောင်သို့ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်မဆိုင်ပါက၎င်းသည်မည်သို့အတူတကွလာမည်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Harley သည်ငါတို့နှင့်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ဒီဇိုင်နာ Casey Ketterhagen တွင်ကလေးများရှိသည်။ သူသည်သူဖြစ်သည် Lego ပရိတ်သတ်နဲ့သူကောင်းတစ်လမ်းအတွက်ဒီရုံညာဘက်ရချင်တယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ဒါပေမယ့်သူကဆိုင်ကယ်ရဲ့အရှည်ကိုပြောင်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒီတြိဂံပြုမှုအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာပါပဲ။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရှာဖွေရန်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အရာအားလုံးသည်မည်သို့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်အားသတိရစေခဲ့သည်။
10269 Harley-Davidson ဆီ Boy သီးသန့်မှာဇူလိုင်လ 17 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် shop.lego.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy ပြန်လည်သုံးသပ်
အတွက်သီးသန့် LEGO 10269 Harley-Davidson Fat Boy လမ်းလျှောက်ခြင်း Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း →